Red Velvet - Irene Myanmar Fanbase - Download Facebook Videos - GenFB.com
171210 #Peekaboo SBS Inkigayo Good-bye Stage Peekaboo promotion ကတော့ပီးဆုံးသွားပါပီ ကံမကောင်းစွာနဲ့ ending stage 1ခုပဲ win ခဲ့ပါတယ် anyway RV did the best👍👍👍축하해🎊🎊🎊 ending stage လည်းဖြစ် 1st win လည်းဖြစ် Irene လည်းအရမ်း slay နေတာမို့ link မဟုတ်ပဲ video တင်ပေးလိုက်ပါတယ် watch & enjoy the slay queen's beauty💖💖💖💖 YT link 🔗https://youtu.be/KnzYozewwdg I
[UPDATE] 171209 @redvelvetsmtown ig update with #RedVelvet Luvies, Gomowoyo Dae~Daneng~Kyu😍Luvies are the bestတဲ့ ဘယ်​​လောက်​​တောင်​ ချစ်​ဖို့​ကောင်းတဲ့ က​လေး​လေး​တွေလဲကွာ😭😍 Eng tran credit to @ gomtaengie👇👇👇 Our Luvies, it's Peek A Boo's last broadcast but thank you for letting us win we love you ❤️ Let's haveafun train ride today daedaengkyu ✌️We feel really good #LuviesAreTheBest #EveryoneHadThisExperssion😮😮😮😮😮 #Peek_A_Boo1stWin🏆👌👌👌👌👌 https://www.instagram.com/p/Bcgh1YPHh3Q/ 🐰🐻
[SNS] 171208 redvelvet.smtown IG update #Irene💖💖💖💘💘💘 အခုတလောရာသီဥတုသာယာတယ်နော် luvies တို့😎 သူလေးအရင်လို၁နှစ်မှ၁ခါပေါ်တော်မူမဟုတ်တော့ဘူး 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘😘😘 🔗https://www.instagram.com/p/BcbiRXYnHec/ #I
[SNS] 171208 redvelvet.smtown IG update #WenRene Super Junior ရဲ့ 'Black Suit' ကို presentation လုပ်နေကြတာ😍😍😍 SJ ကသွားတုန်းကကြည့်ကောင်းပါတယ်😆 သူတို့ကမှပဲရင်ဘတ်စည်တီးအကဖြစ်သွားတယ်😇အဖွားကြီးတွေဆိုတော့သောကများတယ်လေ😂 🔗https://www.instagram.com/p/BcbRqUBHWBI/ #I
171205 #IRENE #PerfectVelvet #Albumsketch
171125 #IRENE #ShowMusicCore
171123 #IRENE #IFC Fansign
redvelvet.smtown Instagram Update👏 Caption ​လေးက 👉🗣러비들고마우👈 တဲ့💖 သူ​လေးရဲ့ ရှားရှားပါးပါး update ​လေး လှပါတယ်​ Bae JooHyun ရယ်​🌸 ပိုလှ​အောင်​ c​amera ​လေးတည့်​တည့်​ကိုင်​ပါ😂 https://www.instagram.com/p/BcOxXkmnHVa/ -❤❤-
[CLIP/Performance Stage] 171201 MAMA Red Velvet - 피카부 + 빨간맛 (Hitchhiker Remix Ver) + $10 with NCT 2017 MAMA မှာ RV ရဲ့ full performance ပါ💖💖 RV တို့ Best Female Group Award ကိုယူပေးခဲ့လို့ admin တို့ကလည်း link မဟုတ်ပဲ video တင်ပေးတာပါ 😋😇 Watch and enjoy this 😍😍😍 -Ireneluv-
[Clip] ‘Best Female Group’ Award Acceptance Speech📢 ဒီထက်​ အများကြီး​မျှော်​လင့်​ခဲ့ကြ​ပေမဲ့လည်း ထိုက်​"တန်​"ရခဲ့တဲ့ ဆုတစ်​ခုအတွက်​ ကျွန်​​တော်​တို့ က​လေးမ​တွေကို congratulation လုပ်​ကြတာ​ပေါ့ 🎉🎉🏆 Red Velvet က Best Female ဆုနဲ့အတူ အလန်းစား performance ကိုလက်​​ဆောင်​​ပေးသွားပါတယ်​👌 ကြည့်​ပြီး ​ပျော်​ရွှင်​ကြပါ​♥.... ​Stage performance ​တွေကြည့်​ချင်​ရင်​​တော့ share post လုပ်​ထား​ပေးပါတယ်​.. Page ထဲ ဝင်​ကြည့်​​ပေးပါ​နော်​ 😉😉 -❤❤-
171130 #redvelvet #mama #hongkong
171128 #WeeklyIdol #Peekaboo 2x Dance
ဘယ်​လို​တွေ​တောင်​ ရီ​လိုက်​ကြတာလဲ ညယ်​မ​လေးတို့😂🔫 I live for that လူယုတ်​မာ ရယ်​သံကြီး 😬🌚 🐰🐢ယုန်​နဲ့လိပ်​တို့ သားမိ😂ရယ်​​နေကြပုံက အားရပါးရရှိချက်​ပဲ😂😍 Credit vid_perfectvelvet 🐰🐻
[CLIP/OFFICIAL] #RedVelvet '2018 SM ARTIST SEASON GREETING' Preview ငါး​ယောက်​လုံး လှ​နေပါသည်​💘💘 preview clip ထုတ်​​ပေးပြီ ဆို​တော့ကား မကြာမီ လာမည်​ ​မျှော်​​ပေါ့​နော်​😝 -❤❤-
[UPDATE] 171123 @redvelvetsmtown ig update with #IRENE #SEULGI #SEULRENE❤💛 အခုလို 2​ယောက်​သား အတူတူselca ရိုက်​တာ​လေး မမြင်​ရတာ အ​တော်​​တောင်​ ကြာခဲ့​ပေါ့☺😍Airplane buddy 2​ယောက်​😄😍 https://www.instagram.com/p/Bb11qBNn3Xb/ 🐰🐻
[CLIP/OFFICIAL] 171123 #IRENE for 'Nuovo' Irene @ Nuovo IG update brand ကျော်ညာတာလား?? လူသတ်တာလား sis??🍉 🔗https://www.instagram.com/p/Bb1WbdEH9ve/ #Ireneluv
171122 #Irene #JTBC #GiveMeaMeal
MBC 'Weekly Idol' Preview Clip #RedVelvet💓 Variety နဲ့ ကစားကွင်း မှား​လာ​သော အစ်​မ​တော်​တို့😂 အရမ်း​ဆော့ကြတာပဲ😁 Nov 29 broadcastလုပ်​မှာ​တဲ့နော်​👌 -❤❤-
[CLIP/OFFICIAL] 171121 #Irene #RedVelvet SM True Thailand Facebook အိုကွယ် ဘာတွေပြောသွားမှန်းလည်းမသိဘူး ဘာမှမသိဘူး Irene ကိုချစ်တာပဲသိတယ်😍😍😘😘 🔗https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1562447997136476&id=212568845457738 #Ireneluv
171120 #RedVelvet #KBS #Entertainment #Weekly